Nagarik News - नागरिक ब्लग
Thursday 13 Jestha, 2073 | Menu	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज	ब्लग	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज
होमपेज / ब्लग
06 May 2016 शुक्रबार २४ बैशाख, २०७३
दीक्षा दहित Be the first to comment!	दीक्षा दहित स्व. मनमोहन अधिकारीको जनताप्रति उत्तरदायी शासनपद्धति, जनप्रिय नेता मदन भण्डारीको दूर-दृष्टिको धरातलमा एमाले अहिलेसम्म अडिरहेको कुरा अहिलेका अध्यक्ष तथा डन कमरेड केपी ओलीले बिर्सनु हुन्न। टुक्काको भरमा जनताले एकछिन मनोरन्जन त लिन्छन्, जहाँ गयो त्यहीँ युवा युवतीलाई धाप मार्दा सानो जमात घेराभित्र ऐँठिएको जस्तो त लाग्छ तर घार छोडेको भगौडा माहुरीको हुल त होइन? बेलैमा बुझ्नु पनि पर्छ। दूर-दृष्टि राख्नेको सोँचको आकारको आयतन पनि ठूलै हुनुपर्छ। विस्तृतमा पढ्नुस्
राज्य र नागरिकका अधिकारको सम्वन्ध र दीक्षितको थुना
02 May 2016 सोमबार २० बैशाख, २०७३
गोविन्द वन्दी Be the first to comment!	गोविन्द वन्दी आज सर्वोच्च अदालतले पत्रकार कनकमणि दीक्षितको थुनाको वैधताको जाँच गर्दैछ। अदालतमा हुने वहस र त्यसबाट अदालतले जारी गर्ने आदेशका बारेमा यो लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको होइन । तर कनकमणि दीक्षित उपर भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानका केही कानुनी पक्षको सार्वजनिक वहस हुन आवश्यक देखिएकाले यस लेखमार्फत राज्य, कानुन र नागरिकका सम्वन्धका बारेमा केही प्रश्नहरु उठाउन खोजेको छु। विस्तृतमा पढ्नुस्
दहेल पकड : पत्तिको पासा
01 May 2016 आइतबार १९ बैशाख, २०७३
दीक्षा दहित Be the first to comment!	दीक्षा दहित दुनियाँमा खेलिने सतरन्जको खेलमध्ये तास (पत्ति)द्वारा चार मित्र मिलेर खेलिने एक जुवाको खेल हो 'दहेला पकड'। मित्रलाई सत्रु र सत्रुलाई मित्र बनाउने पुरानो तासको एकमात्र खेल हो 'दहेल पकड'। जुवा खेल्दा मान्छेभित्र रहेको एउटा शुसुप्त ग्रन्थी यति सक्रिय हुन्छ कि उसले धनजन के स्वयं आफूलाई दाउँमा लगाएको समेत थाहा हुँदैन। सत्ता, सम्पत्ति, शासनले भरिपूर्ण अंग्रेजहरुको मन बहलाउने र दुश्मन नबाबहरुको चित्त दुखाउन खेलिएको अत्यन्त चर्चित पत्तिको खेल हो 'दहेल पकड'। विस्तृतमा पढ्नुस्
प्रकाश तिमल्सिना Be the first to comment!	प्रकाश तिमल्सिना काठमाडौं- नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बनमा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले क्यानलाई निलम्बन गरेपछि नेपाली क्रिकेटको दशा र दिशामा खेलप्रेमीले चासो राख्नु स्वभाविक हुन्छ । आइसिसीबाट एसोसिएट राष्ट्रको मान्यता पाएयताको २८ बर्षमा क्यान पहिलो पटक निलम्बनमा परेको हो । विस्तृतमा पढ्नुस्
कसले प्लेट जुधाएछ, बाबु?
24 Apr 2016 आइतबार १२ बैशाख, २०७३
अम्मर जिसी Be the first to comment!	अम्मर जिसी बस् यत्ति नै रहेछ यो जिन्दगीको भाग र भोग!काठमाडौँ, सुन्धारास्थित कार्यालयमा महाभुइँचालोको झट्का बेहोर्दा यस्तै लागेको थियो। हल्लाइकै बीचमा त्रस्त हुँदै सडकमा के निस्केको थिएँ, धरहरा गायब थियो। सबैतिर भागाभाग, कोकोहोलो, यत्रतत्र धुलाम्मे! ध्वस्त धरहराबाट जीवनको भीख माग्नेहरूको चित्कार कहालीलाग्दो थियो। मजस्ता धेरैले के गर्ने भन्ने भेउ पाइरहेकै थिएनन्। जे त पर्ला भन्दै ध्वस्त धरहरा खोतल्न कस्सिइहाले केही तन्नेरी। विस्तृतमा पढ्नुस्
भूकम्पमा मोबाइल न्युजरुम
प्रशान्त लामिछाने Be the first to comment!	प्रशान्त लामिछाने काठमाडौं- एक वर्षपछि यो दिन फेरि आएको छ। भूकम्पका एक वर्ष त्रासमै बिते। पुन:निर्माण र राहतको आशमै एक वर्षको चक्र पूरा भयो। वैशाख १२ पछिका केही दिन न्युजरुम त्यति सहज भएन। त्यसमा पनि अनलाइनकर्मीहरुका लागि छिनछिनका समाचार अपडेट गर्न प्राविधिक कठिनाई समेत झेलिरहन पर्‍यो।
हल्लेरै बितेको एक वर्ष
23 Apr 2016 ११ बैशाख, २०७३
विनोदविक्रम केसी Be the first to comment!	विनोदविक्रम केसी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद!मुखबाट टुक्का, चुट्किला, कटाक्ष, उपहास र दम्भमात्र निकाल्ने उनले त्यो दिन एउटा सत्य पनि निकालिदिए। त्यो दुर्लभ घटना थियो, नगरा बजाएर उत्सव मनाउन लायक! ओलीले अन्तस्करणको इमानदार ध्वनिलाई छेकथुन नगरी, नखजमजाई भने, 'यस्तै ताल हो भने भूकम्पपीडितलाई एक दशकमा पनि घरभित्र बसाउन सकिँदैन।' शब्दहरू अक्षरशः यिनै नभए पनि मजबुन यही थियो। विस्तृतमा पढ्नुस्
मृत्युको मुखमा पुग्दा...
ध्रुव दंगाल Be the first to comment!	ध्रुव दंगाल सिन्धुपाल्चोक– आँखा खुलेदेखि नै हो चियाको लत लागेको। तर ओछ्यान छोड्न पटक्कै मन लागेको होइन। वैशाखको धूपमा बिहानीपख निदाउनुको मज्जै बेग्लै। नाडीको घडीले मध्याह्न साढे ११ बजाइसकेछ। चियाको तलतलले उठाइछाड्यो। मुख धोएर कोठामा छिर्दा शरीरले केही चिसो महसुस गर्योक। झ्यालबाट बजार नियालें, चौतारा धुम्म थियो। आकाशमा हल्का बादल मडारिएको थियो। झ्याल नजिकै ह्यांगरमा झुन्डिएको पातलो ज्याकेट भिरें। मन दोमन भयो, तीन–चार पटक ज्याकेट लगाउने र फुकाल्ने क्रम चल्यो। विस्तृतमा पढ्नुस्
कहिलेसम्म सहने अभिनेत्रीले अश्लिल गाली?
18 Apr 2016 सोमबार ६ बैशाख, २०७३
स्मृति ढुंगाना Be the first to comment!	स्मृति ढुंगाना सुन्दरी पर्दामा उनीहरू चम्किला देखिन्छन्। कतिपयले उनीहरूलाइ रोल मोडलै मान्छन्। कमाइ पनि आकर्षक नै गर्छन्। काम र नामले मालामाल देखिने फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय अभिनेत्रीहरुका केही फरक दु:ख छन्। यो भन्दा फरक एउटा तीतो यथार्थता छ- उनीहरू बिना कारण कसैको अश्लिल र भद्दा गाली सुन्न विवश छन्। विस्तृतमा पढ्नुस्
अनि मैले रक्सी छाडेँ
16 Apr 2016 ४ बैशाख, २०७३
विजय राई, Be the first to comment!	विजय राई, चैत पहिलो साता हामी परिवारै सिक्किम गयौं। साँझ ससुराली पुगियो। ज्वाइँ आउने भनेर अनेकौं परिकार, ब्रान्डी र बियर व्यवस्था गरिएको थियो। पहिला पनि यस्तै मेजमान पाइन्थ्यो ससुरालीमा। विस्तृतमा पढ्नुस्
भुल्न नसकेको उसको मृत्यु
08 Apr 2016 शुक्रबार २६ चैत्र, २०७२
पवित्रा सुनार Be the first to comment!	पवित्रा सुनार जन्म र मृत्यु स्वभाविक प्रक्रिया हो। कति मृत्यूहरु सहज लाग्छन् कति कठिन। शायद कारण सहितका मृत्यहरु मान्छेले सजिलै स्वीकार्न सकिन्छ। जति अस्वभाविक मृत्युहरु स्वीकार्न सकिंदैन। विस्तृतमा पढ्नुस्
StartPrev123…NextEndPage 1 of 13	भर्खरै...